Ao anatin'ny lisitra malaza ianao: Nandrahona ny 'mpisintaka' an'i Taiwan i Shina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Ao anatin'ny lisitra malaza ianao: Nandrahona ny 'mpisintaka' an'i Taiwan i Shina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nandefa fandrahonana henjana ho an'ny daholobe ho an'ireo mpanohana ny fahaleovantenan'i Taiwan ny solontenan'ny governemanta Shinoa, Zhu Fenglian.
Mandrahona ireo manampahefana ao Taiwan i Shina: Ireo izay mamadika ny tanindrazany sy mitady hampisara-bazana ny firenena dia voatendry ho ratsy fiafara, ary tsy maintsy ho lavitry ny vahoaka sy hotsarain'ny tantara.
Mandrahona ny 'hanasazy' ireo mpanohana sy mpanohana ny fahaleovantenan'i Taiwan i Shina.
Voarara tsy hiditra ao amin'ny tanibe, Hong Kong ary Macao ny 'separatista' any Taiwan.
Ny 'separatista' dia hohadihadiana noho ny heloka bevava mifanaraka amin'ny lalàna Kominista Shina.
mpitondra tenin'ny Biraon'ny Raharaham-panjakana ao Taiwan ao amin'ny Filankevi-panjakana ao Shina, namaly ny fanontanian'ny haino aman-jery mikasika ny fepetra sazy natao tamin'ireo mpanohana ny Taiwan ny fahaleovantena, dia nanambara fa ireo 'singa mpisintaka' ireo dia ao anatin'ny lisitr'ireo lasibatra ao Shina ary 'hosazina' araka ny 'araka ny lalàna.'
Nandefa fandrahonana henjana ho an'ny daholobe ny solontenan'ny governemanta Shinoa, Zhu Fenglian Taiwan ireo mpomba ny fahaleovantena, mampitandrina fa ireo ao anatin'ny lisitra voadona, miaraka amin'ny havany, dia tsy hiditra ao amin'ny tanibe sy ny faritra roa manokana fitantanana ny Hong Kong ary Macao, ary ireo andrim-panjakana miara-dia aminy dia hoferana tsy hanao fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana sy olon-tsotra ao amin'ny tanibe.
Nanampy ihany koa i Zhu fa ny mpanohana azy ireo sy ny orinasa mifandraika amin'izany dia voarara tsy hanao hetsika fitadiavana tombony any amin'ny tanibe, ankoatra ny sazy hafa.
“Ireo izay mamadika ny tanindrazany sy mikatsaka ny hampisara-bazana ny firenena dia voatendry ho ratsy fiafara, ary tsy maintsy holavin'ny vahoaka sy hotsarain'ny tantara,” hoy i Zhu, nanondro ireo mpanohana ny TaiwanNy fahaleovantenan'i Taiwan, anisan'izany ny praiminisitra Taiwan Su Tseng-chang, filohan'ny mpanao lalàna Yuan Yu Shyi-Kun ary ny minisitry ny raharaham-bahiny Taiwan Joseph Wu.
Ireo ao anatin'io lisitra voadona io dia hotazonina ho tompon'andraikitra mandritra ny androm-piainany ary hohadihadiana ho tompon'andraikitra amin'ny heloka bevava mifanaraka amin'ny 'lalàna Kominista Shina', hoy i Zhu nanampy.